Okokuqala, Ugcino ziyafuneka ukuze oololiwe ebusuku ngamazwe oololiwe kwaye ungayenza kwi-Gcina Ukuqeqesha. Ebezigciniwe kungenzeka kanjalo kuba intercity oololiwe-high speed (okubalwa EuroCity yaye amabanga). Main intercity routes are Vienna & Linz, Salzburg, Graz & kwisithili laseCarinthia. Austria Yuruphu Route Planner inika unxibelelwano oluhle kakhulu uloliwe ngamazwe. Ngaphezu, iziselo namaqebengwana ezikhoyo koololiwe ezininzi kunye iinketho yokudlela ziyafumaneka kwi oololiwe ngamazwe. Uyakwazi ukuba Bikes koololiwe Austrian. Kufuneka kanjalo tickets kuba Austria ukuba sikuvumela ukuqeqesha utyelele Lichtenstein.
Ngokufanayo ku Belgium Yuruphu Umzila Planner, you do not need to make a reservation for most trains in Bosnia. It is not possible to make reservations for oololiwe yasekhaya e Bosnia. Oku kuquka oololiwe nkqi Brzi Voz kunye
You don’t need much of Europe Route Planner in terms of reservations for Barz Vlak local ‘rapid’ oololiwe kunye noololiwe Patnicheski lendawo. kunjalo, okugcinelwa ezifunekayo Expresen Vlak oololiwe fast and oololiwe ngamazwe. oololiwe International efumaneka Bulgaria zibandakanya Bulgaria Express, the Black Sea Train, I Bucharest Istanbul Express kunye ngokufanayo nezinye oololiwe eshiya e Sofia. kweendlela ezingundoqo Bulgaria ukuba uthathe 6-8 iiyure (oololiwe yokulala ziyenzeka) Sofia is, kanjalo, omkhulu station for uxhulumaniso ngamazwe. Bikes zivumelekile koololiwe ke kuya kufuneka ukuba uhlawule eyongezelelweyo kubo.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-route-planner-trains/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela